'၀' ပြည်နယ် ခွင့်ပြုပေးရန် တောင်းဆိုမှု ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်လာနိုင် | အောင်ရဲရင့်.......(သတင်းနှင့်နည်းပညာ)
မင်္ဂလာပါ အောင်ရဲရင့် သတင်းနှင့်နည်းပညာ များကိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းသက်သက်သာဖြစ်ပါသည်.....
facebook friend ဖေ့ဘွတ်မိတ်ဆွေးများ
Delivered by အောင်ရဲရင့်
စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက်အရမ်း ကို Smart ကျတဲ့ Links
((( Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားရမဲ့ စာအုပ်အစုံပါတဲ့ Links ))) မာတိကာ သို့မဟုတ် ရှာဖွေရန် (အပေါ်ပိုင်း တွင် အမျိုးအစားလိုက်ရှာနိုင်ပြီး အော...
0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ
မာတိကာ သို့မဟုတ် ရှာဖွေရန် (အပေါ်ပိုင်း တွင် အမျိုးအစားလိုက်ရှာနိုင်ပြီး အောက်ပိုင်းတွင် အမည်အတိုင်း ကမှ အ အထိ ရှာနိုင်ပါသည်။) အမျိုးအ...
အပျို၊အပျိုစစ်နှင့် အပျိုစင် ဆိုတဲ့ ဒီပို့ စ်လေးကို ညီမငယ်လေးတွေ ခွဲခြားသိမြင်အောင်လို့ရေးလိုက် တာပါ...။ မိန်းမဋီကာကြီးကို ကျေညက်လို့ လဲ...
မိမိ facebook ရဲ့ wall မှာ တစ်ခြားသူ တင်ခွင့်tagခွင့်မရအောင် ပိတ်နည်း
မိမိ facebook ရဲ့ wall မှာ တစ်ခြားသူ တင်ခွင့်မရအောင် tag ပေးခွင့်မရအောင် ပိတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးပါပဲ. ကိုယ့်ရယ့် fb wa...
ဖုန်းကြားရှင်ယခင် (ဗကပ မှ ခွဲထွက်) အင် အား (၁၀၀၀)'ခန့်ဟာကုံလုံ နယ် မြေ ဘက် မှ ကိုးကန့် နယ် စပ်သို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက် တိုက်ပွဲများပြင်းထန်
လောက်ကိုင်၊ ကုန်းကြမ်း၊ လောက်ကိုင်မြောက်ဘက် ၃ နေရာကနေ အင်အား အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အင်အား ၁၀၀၀ကျော်ရှိနေကြောင်းစစ်ကူလိုက် တဲ့...
Samsung ဖုန်း firmware နည်းပညာ
Samsung Galaxy S3 Clone i9300 Android 4.1 ကို firmware ပြန်တင်မယ်။ Chine S3 Clone i9300 ကို ကလိတာပဲဖြစ်ဖြစ် မှား Root မိ...
Android App လေးတွေစုစည်းခြင်း Android App လေးတွေစုစည်းပြီး(26) တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့(115MB)ရှိပါတယ်။ အထဲမှာ ...
"ဈေးကွက်စီးပွားရေး သင်ယူနုိုင်မည့် ပညာရေးလမ်းကြောင်းများ
"ဈေးကွက်စီးပွားရေးတွင်မရှိမဖြ စ်လိုအပ်မည့် Marketing ပညာနှင့် သင်ယူနုိုင်မည့် ပညာရေးလမ်းကြောင်းများ" Marketing Institu...
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ဆော့ဝဲလေးကတော့အရမ်းကောင်းပါတယ် ကွန်ပျူတာရှိတဲ့သူတိုင်းတင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါအမှားတွေ Tempဖိုင်တွေကိုလည်း...
Y320-C00 firmware installation , stock recovery backup,install & Troubleshoot
ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် stock recovery က ဘယ်လိုအရေးပါလဲဆိုတာ မရှင်းပြတော့ပါဘူး တော်တော်များများသိပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါ အရင် အရင် ထွ...
အင်း ...... သာဓုပြောတဲ့ လူဝါးဝတယ်ဆိုတာ အဲဒါကိုပြောတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ရုံးသုံးစာကို တရုတ်စာအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ဒေသအတွင်း နေထိုင်သူ အားလုံး၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ဗမာစကားနှင့် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား သုံးစွဲသော '၀' ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းကို ပြည်နယ်အဆင့် တိုးမြှင့်ပေးလိုက်သည်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုပုံစံအသွင် ပြောင်းသွားနိုင်ကြောင်း များလည်း ရှိနေသည်။
အုပစုလေးများ '၀' ပြည်နယ် ခွင့်ပြုပေးရန် တောင်းဆိုမှု ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်လာနိုင်
ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုကို ကုမ္ပဏီလေးခုက ယှဉ်ပြိုင်ဆေ...
မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ထနောင်းတိုင်ရွာ၊ အလင်းဥယျာဉ်ပညာေ...
လူဖြူလူမဲ ကိစ္စမျိုး နဲ့ မြန်မာပြည်က အဖြစ်အပျက်တွေက...
စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက်အရမ်း ကို Smart ကျတဲ့ Lin...
မလေးရှားရောက် မြန်မာများနှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားမ...
အခွင့်အရေး တို့ လွတ်လပ်ရေး တို့ တရားမျတရေး တို့ ဆိ...
(ဗဟုသုတ အဖြစ် ဖတ်ကြည့်ပါ အချစ် နှင့် လက်ထပ်ခြင်း
ဒေါ်လာဈေး ဘယ်လဲ (မြဝတီဆောင်းပါး)
မင်းအောင်လှိုင်အား ထိုင်းဘုရင်၏ တော်ဝင်ဘွဲ့တံဆိပ်ေ...
လားရှိုးပဋိပက္ခ သတင်းယူနေသူ သတင်းထောက် တဦး ရိုက်နှက...
သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်မှ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်အနံ NLD ရုံးများရုပ်သိမ်းပေးရန်
၂၀၁၃ ခုနှစ် နေပြည်တော် အရှေ့အာရှ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိ...
ဒေါက်တာဒေါ်ယဉ်ယဉ်နွေ နှင့် ဒေါက် တာဒေါ်စုကြည် တို့၏စ...
အမေရိကန် မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ထိုး...
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက်...
ဝါရှင်တန်မြို့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် နှင့် အင်တာဗျူး...
ရှမ်းပါတီ မှန်သမျှကို မူးယစ်ဆေးငွေများဖြင့် ထောက်ပ...
KBZ ကမ္ဘောဇဘဏ် ဥက္ကဌ ဦးအောင်ကိုဝင်းက တိုင်းရင်းသာြး...
နအဖနဲ့ UWSA “၀” တို့ အားပြိုင်ကြမည့်ပွဲစာဖတ်ပရိသတ်...
သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူစယ်မြို့ဗုံးတစ်လုံး ပေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စစ်တပ်အကြောင်း မကောင်း ပြောခ...
ဂဠုန် ဆရာစံ ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာ လင်္ကာ
ဆန္ဒပြဒေသခံတွေကတော့ သူတို့အနေနဲ့ စီးပွားရေးတဟုန်ထို...
- အာခါတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး အာခါတိုင်းရင်း သာ...
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်ချက်များေ...
NLD ပါတီဝင်ဟောင်း ၄ ဦး လျှောက်လွှာတင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆ...
အလ်ဂျာဇီးယား , AP အပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသတင်းဋ္ဌာနအချို...
ဖိနပ်တိုက်ခဲ့တဲ့ ဆင်းရဲသား ကောင်လေးဟာ ဘယ်သူလဲ
မုန်တိုင်း MAHASEN နဲ့ ပတ်သက်လို့ အကြံပြုချက်
RELATED POSTLike PageLazada Vietnam BỘ sưu tập nướ...
maroonMaroon5- Payphone (Avery ft. Max Schneide...
အထူးခြားဆုံး၊အံ့သြစရာအကောင်းဆုံး အရာများကို ရွေးချ...
အွန်လိုင်းမှာသင်/ ဖြေပြီး ဒီပလိုမာတွေရယူနိုင်တဲ့နိ...
ကမ္ဘာ တတိယ အကြီးဆုံး နေစွမ်းအင် စက်ရုံ မြန်မာ နိုင်...
သတိ …. မြန်မာနိုင်ငံရှိကားကုမ္ပဏီများထံမှလိမ်စားနေ...
ဆိုင်ကလုန် မဟာဆန် နေရာရွှေ့၍ အိန္ဒိယသို့ လမ်းကြောင်း...
“ မြန်မာသံရုံး ကို ဗုံးခွဲ တိုက် ခိုက် ရန် စီစဉ် ထ...
Copyright © အောင်ရဲရင့်.......(သတင်းနှင့်နည်းပညာ) | သတင်းနှင့်နည်းပညာများမျှဝေလိုပါက aungyeyintmm@gmail.com သို့ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။